Tim Cook gwara onye ahịa Apple nwere Cerebral Palsy na Glasgow ekele maka nnweta ụlọ ọrụ ahụ | Esi m mac
Ọbịbịa Tim Cook na Glasgow abụghị naanị mmemme onyinye Honoris Causa nke Mahadum Glasgow nyere. O jikwa ohere ahụ gaa na Applelọ Ahịa Apple, ebe o nwere mkparịta ụka pụrụ iche. E nwere Angela Reed, onye na-arịa ọrịa ụbụrụ na-eji iPhone ekwurịta okwu, n'ihi atụmatụ nnweta ya.
N'ajụjụ ọnụ nke akwụkwọ akụkọ mpaghara The Scotsman, Cook kwuru banyere uru nke iPhone iji nweta teknụzụ ya, ọbụlagodi mgbe onye ọrụ na-arịa nsogbu nnweta.
Anyị mesiri ike bụ na accessibility nke anyị na-… anyị chepụta na ndị mmadụ nkwarụ n'uche… anyị kwenyere na onye ọ bụla ga-enwe ike iji uru nke technology. Okwesighi ka diri ndi mmadu nwere obi uto na ha enweghi nkwarita.
Enwere m mmasị izute Angela na otu o si kesara m ozi na iPhone ya.
Dị ka DailyMail, Reed na-eji ngwa dị iche iche iji mee ka nkwukọrịta dị mfe. Assssitive Aka Ọ na-enyere aka ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịpị ihuenyo ma ọ bụ chọọ nkwụnye maka ya na Wepụ aka imeghe ngwa ndị a tụrụ aro.
Enweela Apple ọtụtụ ugboro maka njirimara nnweta dị iche iche na ngwaahịa. Na Mac dịka ọmụmaatụ, ọ na-arụ ọrụ ogologo oge yana mmegharị nke ngwaike ya na ngwanrọ maka mkpa ndị ọrụ. Anyị nwere ike ịchọta nhọrọ na usoro mmasị.
Ozugbo anyị nwetara ngwa ahụ, anyị nwere ike ịhụ ọrụ dị iche iche. Anyị nwere ike ịgakwuru VoiceOver, Bugharịa, Ihuenyo na Okwu, iji kpọtụrụ Mac, hụ akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ka ukwuu, mee ka ọhụụ dị mfe maka nsogbu ọhụụ dị nro ma ọ bụ ọbụna gwa ya ka ọ gụọ anyị ederede.
Anyị nwekwara ike hazie enyemaka na mmapụta ozi, mmeputakwa nke multimedia ọdịnaya ma ọ bụ ikwado ọgụgụ nke ndepụta okwu. N'ikpeazụ, ọrụ nke ndị ọrụ niile amachaghị, dị ka mkpọpụta, iji ya Mac anyị ga-ede anyị ederede anyị kpọpụtara.
Ka anyi nwee olile anya na oganihu uzu na teknụzụ na abia, dika ọgụgụ isi, ga eme ka ndi mmadu achota ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tim Cook na onye ahịa Apple nwere Cerebral Palsy kwuru okwu na Glasgow n'ihi nnweta ụlọ ọrụ ahụ
"Mechie Mgbaaka Gị" mgbasa ozi Apple ọhụrụ iji kwalite Apple Watch